“Shumirai Jehovha muchifara” (2)
‘Mwari ndiye akatisika’ (3)
Rwiyo rwekuonga. 100 Shevedzerai kuna Jehovha muchipembera, imi nyika yese.+ 2 Shumirai Jehovha muchifara.+ Uyai pamberi pake muchishevedzera nemufaro. 3 Zivai* kuti Jehovha ndiMwari.+ Ndiye akatisika, uye tiri vake.*+ Tiri vanhu vake nemakwai emafuro ake.+ 4 Pindai pamagedhi ake muchionga,+Pindai muzvivanze zvake muchirumbidza.+ Muongei; rumbidzai zita rake.+ 5 Nekuti Jehovha akanaka;+Rudo rwake rusingachinji runogara nekusingaperi,Uye kutendeka kwake kunogara kwezvizvarwa zvese.+
^ Kana kuti “Bvumai.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kwete isu pachedu.”